ऋषिसँग मेरो दोस्रो विवाह गराएर परिवारले सम्मान गरे, सरीता लामिछानेको प्रेम कथा ! हेर्नुहोस् – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/ऋषिसँग मेरो दोस्रो विवाह गराएर परिवारले सम्मान गरे, सरीता लामिछानेको प्रेम कथा ! हेर्नुहोस्
3,024 Less thanaminute
चलचित्र क्षेत्रमा जीवनको रथ लामो समय गुडाउन नसकेका थुप्रै जोडी छन् । त्यस्तोमा कलाकार सरिता लामिछाने र निर्देशक ऋषि लामिछानेको वैवाहिक जीवन यात्रा सबैका लागि उदारण बन्ने गरेको छ । वैवाहिक जीवनको २०औँ वर्षसँँगै विताएका उनीहरूकी ९ वर्षकी छोरी छिन् । दुवैजना चलचित्र क्षेत्रमा आआफ्नै तरिकाले सक्रिय छन् ।
सरिता र ऋषिलाई देखेर डाहा गर्नेहरु पनि धेरै छन् । कतिपयले ‘क्या जमेको जोडी’ भन्ने गरेका छन् । घरपरिवार एकआपसमा मिलेर चलाउँछन् । ठूला निर्णय ऋषिले गर्छन् भने घरको निर्णय सरिताको हातमा छ । सरिता ऋषि संसारकै उत्कृष्ट श्रीमान् हुन् भन्न पछि पर्दिनन् । प्रस्तुत छ सरिताकै शब्दमा ऋषि र उनको प्रेम :त्यस्तै २२ वर्ष अगाडि । त्यतिबेला म अध्यायन गर्दै थिए ।
मेरो दिदी र ऋषिजी (ऋषि लामिछाने) क्लासमेट रहेछन् । दिदीका कारणले उहाँसँग भेट भयो । सो समय म सानै थिए । उहाँ कलेज अध्यायन र चलचित्रतिर स्ट्रगल गर्दै हुनुहुदो रहेछ । हिरो बन्ने सपना थियो उहाँमा । दिदीका कारणले हाम्रो बेलाबेलामा भेट भइरहन्थ्यो ।
डाक्टरसाब मैलेअर्को पुरुषबाट बच्चाजन्माउदै छु योकुरा श्रीमानलाईथाहाहुनसक्छ ?
केन्द्रीय कारागारका ५० कैदीबन्दी र ५० सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण